Somaliland: Shir Lagu Xoojinayay Iskaashiga Gobollada Ood-wadaagta Ah Ee Somaliland Iyo Itoobiya Oo Lagu Soo Gabo-gabeeyay Dhagax Buur - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shir Lagu Xoojinayay Iskaashiga Gobollada Ood-wadaagta Ah Ee Somaliland Iyo Itoobiya...
Kalmadihii Guddoomiyeyaasha Gobollada Jarar, Tog-dheer, Daad-madheedh Iyo Xildhibaan Mubaarig Bidhi Ee Gunaanadka Shirkan
Shir ay isku kaashanayaan dhinacyadda ammaanka, ganacsiga iyo wax wada qabsiga maamuladda gobollada Togdheer, Daad-madheedh oo dhinaca Somaliland ah iyo maamulka iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Jarar, ayaa khamiistii lagu soo gabo-gabeeyay magaaladda Dhagax-buur ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waxa shirkan ka qeyb galay Guddoomiyeyaasha Gobollada Togdheer, Daad-madheedh, iyo Jarar, masuuliyiin ka socday degmooyinka hoos yimaada gobolladan iyo saraakiisha amniga ee gobolladaasi oo ay ka mid ahaayeen taliyaha qeybta booliska Tog-dheer, Taliyeyaasha ciidammada laanta socdaalka iyo asluubta ee gobolkaas. Halka dhinaca Itoobiya uu ka qeyb galay Taliyaha ciidammada dawladda fedaraalka Itoobiya ee jiida Gaashaamo illaa Xarshin iyo saraakiil kale oo Itoobiyaan ah.
Shirkani mudadii uu socday waxa lagu lafo-guray sidii gobollada oodwadaagta ahi iskaga kaashan lahaayeen dhinacyadda ammaanka iyo isku socodka labada dadweyne ee gobollada Tog-dheer, Daad-madheedh iyo Gobolka Jarar ee xaruntiisu tahay magaaladda Dhagax-buur ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Guddoomiyaha gobolka Jarar ee Itoobiya Cabdi Cali Mataan oo ka hadlay gunaanadkii shirkan waxa uu sheegay inuu kulankani ahaa mid lagu faaqiday sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga gobolleed iyo dawladeed ee gobollada ood-wadaagta ah ee Somaliland iyo Itoobiya.
“Shirkani waxa uu ahaa mid taariikhi ah oo guul u wada ah Somaliland iyo itoobiya labadaba. Shirkani waxa aanu kaga hadlay qoddobo badan oo ku wajahan wax-wada qabsiga iyo iskaashiga dhinaca amniga ee ka dhaxeeya labada dawladood. Shirkani waxa uu ka nixinayaa cid kasta oo nabad-gelyadda iyo daris wanaaga neceb. Waxa kale oo uu ka farxinayaa cid kasta oo samaha iyo nabad-gelyadda jecel,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Gobolka Jarar, oo marti-geliyay kulan hawleedkaas labada maalmood qaatay.
Badhasaabka Gobolka Tog-dheer Maxamed Ibraahim (Qabo) oo isaguna dhinaciisa ka hadlay shirkan waxa uu yidhi “Waa la is calool xaadhay mudadii shirkani socday. Waxa kulankan goob joog ka ahaa Guddiyada nabad-gelyadda ee shanta degmo ee gobolka Togdheer ee soohdinta la leh gobolka Jarar oo ay ka mid yihiin degmooyinka Dururuqsi, Bali-dhiig,Biyo-xidha, Raydab Khaatumo, Xaaji Saallax iyo kuwa degmooyinka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ay xadka wadaagaan. Waxa laga hadlay mawaadiic la xidhiidha dhaqaalaha, nabad-gelyadda iyo wada shaqeynta heer gobol iyo degmo.”
Xildhibaan Mubaarig Yuusuf Cilmi (Bidhi) oo ah Xildhibaan ka tirsan Golaha deegaanka Burco oo ka wakiil ahaa Maayarka Iyo golaha deegaanka, ayaa shirkan ku tilmaamay mid dhabaha u xaadhaya sidii xidhiidhka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya loogu daadejin lahaa heer gobol.
“Shirkani waxa uu ahaa mid ahmiyad weyn u leh labada dal ee Somaliland iyo Itoobiya. Waxa uu ahaa mid ay ku kulmeen gobollada Togdheer,Daad-madheedh iyo Jarar. Qoddobadii ka soo baxayna waxa ugu weynaa in mudnaanta koowaad la siiyo nabad-gelyadda iyo isku socodka bulshadda gobolladan. Waxaan jecelahay inaan u mahad-naqo maamulka iyo shacabka gobolka Jarar oo si wanaagsan oo walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ah noo soo dhaweeyay,”ayuu intaas ku daray Xildhibaan Mubaarig Bidhi.
Dawladaha Somaliland iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya xidhiidh iskaashi oo qoto-dheer,waxaanay labada dal iska kaashadaan dhinacyadda amniga, ganacsiga iyo isku socodka labada shacbi. Shirkani waxa uu qeyb ka yahay mid kor loogu sii qaadayo iskaashigaasi iyo wax wada qabsiga labada dal iyadoo shirar noocan oo kale ah lagu kala qabtay labadii bilood ee la soo dhaafay Jig-jiga, Boorame, Gabiley iyo kan u dambeeyay ee lagu soo gunaanaday magaaladda Dhagax-buur.
Ethiopian community in Somaliland